Health Archives - 24 News Press
Posted By: 24 News Presson: September 01, 2020
१६ भदौ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट पूर्वन्यायाधिश माधव प्रसाद चालिसेको मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ का ७० वर्षीय चालिसेको बासबारीस्थित गंगालाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।लामो समयदेखि मुटुको समस्याबाट पीडित रहेका चालिसे भदौ ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई उपचारकै क्रममा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि अस्पतालको कोरोना आइसोलेन वार्डमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उनको आज बिहान ७ बजे मृत्यु भएको अस्पताल श्रोतले संसारन्युजलाई जानकारी दिएको छ । चालिसे पुनरावेदन अदालत पोखराको मुख्य न्याधिशबाट २०७० सल असारमा सेवा निवृत्त भएका थिए ।
Posted By: 24 News Presson: August 10, 2020
एजेन्सी, विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ करोड १६ हजार ३२६ पुगेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ ।
एकै दिन २ लाख १९ हजार ३५३ जना संक्रमित भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ४ हजार ७८३ जनाको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ७ लाख ३३ हजार ५९२ पुगेको छ ।
१ करोड २८ लाख ९२ हजार ७४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा २ लाख ६ हजार १३९ जनाको मृत्यु भएको छ । ३० लाख ३५ हजार ९९७ जना संक्रमित भएकोमा १८ लाख २४ हजार ५७१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा २ लाख ३४ हजार ५२३ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या ६१ लाख १५ हजार ५७१ पुगेको छ । त्यसमध्ये ३२ लाख ६० हजार ४३८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा १ लाख ९ हजार ६०० जनाको मृत्यु भएको छ । ५० लाख ३९ हजार ७४६ जना संक्रमित भएकोमा ३८ लाख १० हजार ८१३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा १ लाख ५९ हजार ४४८ जनाको मृत्यु भएको छ । ४७ लाख ४२ हजार ४४८ जना संक्रमित भएकोमा ३२ लाख ४० हजार ८८४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा १० हजार ४०८ जनाको ज्यान गएको छ भने १० लाख ५१ हजार ८२१ संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये ७ लाख ३६ हजार ६२८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा ४१२ जनाको मृत्यु भएको छ । २२ हजार ९८६ जना संक्रमित भएकोमा १३ हजार २४० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
जनकपुर, धनुषामा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आइतबार ३८ वर्षीय एक युवकको मृत्यु भएको छ ।
शहीदनगर–८ डुमरिया बस्ने तीे युवक रुघाखोकी र ज्वरोबाट पीडित भएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना भएका थिए । उनको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि थप उपचारका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजाने क्रममा सिरहामा मृत्यु भएको प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रदेश नं २ का स्वास्थ्य निर्देशनालयका सहनिर्देशक विजयकुमार झाले ती युवकको आइतबार बिहान स्वाबको नमूना सङ्कलन गरिएको र साँझ रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी दिए । शवलाई जनकपुरमै व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । धनुषामा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्युको यो पहिलो घटना हो । यस प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । रासस
एजेन्सी, विश्वमा नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ६४ लाख ४ हजार १० जनामा संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ६ लाख ५१ हजार ६७० जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, उपचारपछि घर फर्किने संख्या १ करोड ३७ हजार ४४८ जना पुगेको छ । हालसम्ममा कोरोना भाइरसका कारणबाट अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या ४३ लाख ७१ हजार २७६ जना पुगेको छ । अमेरिकापछि ब्राजिलमा बढि संक्रमित देखिएको छ ।
अहिलेसम्म ब्राजिलमा २४ लाख १९ हजार ९०१ जना, भारतमा १४ लाख ३६ हजार १९ जना, रसियामा ८ लाख १२ हजार ४८५ जना र दक्षिण अफ्रिकामा ४ लाख ४५ हजार ४३३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा १ लाख ४९ हजार ८४३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, ब्राजिलमा ८७ हजार ५२ जना, बेलायतमा ४५ हजार ७५२ जना, मेक्सिकोमा ४३ हजार ३७४ जना र इटालीमा ३५ हजार १०७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्ममा अमेरिकामा २० लाख ९० हजार ११० जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैगरी, ब्राजिलमा १६ लाख ३४ हजार २७४ जना, भारतमा ९ लाख १८ हजार ७३५, रसियामा ६ लाख २५० र चिलीमा ३ लाख १८ हजार ०९५ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । त्यस्तै नेपालमा संक्रमितको संख्या १८ हजार ६ सय १३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार आजसम्म घर फर्किनेको संख्या १३ हजार १ सय २८ जना रहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ४५ जना पुगेको छ ।
जोखिमपूर्ण काठमाडौं !
Posted By: 24 News Presson: July 24, 2020
काठमाडौं, काठमाडौंमा झट्ट बाहिर निस्किँदा कोरोना भाइरसको जोखिम छैन, जस्तो लाग्छ ।
चोक, पसल, होटल, क्याफे सबैतिर मानिसको भीडभाड देखिन्छ । बाहिर गल्ली सडकमा मानिसको उही किसिमको चाप सुरु भएको छ । अधिकांशले सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिँदैन ।
साना चिया पसलहरुमा चिया चुरोट खानेहरुको भीड पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ । ठूला क्याफेहरु पनि भरिभराउ हुन थालेका छन् ।बिहीबार राजधानीका चाबहिल, पुतलीसडक, अनामनगरलगायतका तरकारीदेखि कपडा पसलहरुमा मानिसहरुको घुइँचो थियो ।
पसलेले एकाध पसलबाहेक अधिकांशले आउने ग्राहकको बीचमा दूरी कायम गराएका छैनन् । पसलेहरुलाई ग्राहकबीचको भौतिक दूरीभन्दा पनि व्यापारको बढी चिन्ता भएको पाइन्छ ।
धेरैले सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । जसले गर्दा उपत्यकामा जोखिम बढ्दो देखिन्छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा उपेन्द्र अर्यालले लेखेका छन् ।
कोरोना परीक्षण गर्न सरकारले तोक्यो ११ अस्पताल
काठमाडौँ, सरकारले विदेश जाने नेपालीका लागि पिसिआर परीक्षण गर्नलाई ११ ओटा अस्पताल तोकेको छ ।
सरकारले पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि ११ ओटा अस्पताललाई अनुमति दिएको छ । यसरी अनुमति पाउनेमा उपत्यकाभित्र वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिबि शिक्षण अस्पताल रहेका छन । उपत्यकाभित्र यी तीन अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्न पाइनेछ । त्यस्तै सरकारले उपत्यका भन्दा बाहिर सेती अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी अस्पताल र कर्णाली प्रदेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, सुर्खेतलाई पिसिआर परिक्षण गर्न अनुमति दिएको छ ।
सरकारले बिदेशी नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पिसिआर गर्न परे उपत्यकामा रहेको निजि अस्पतालहरुमा गर्न सक्ने जानकारी पनि दिएको छ । त्यसको लागि सरकारले ललितपुरमा रहेको स्टार अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा.जागेश्वर गौतमले सरकारले तोकेको र अनुमति दिएको अस्पतालमा मात्र पिसिआर गर्न आग्रह समेत गरेका छन ।
दाताले दिएको ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न
Posted By: 24 News Presson: July 20, 2020
काठमाडौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताले उपलब्ध गराएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दाताले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको देखिएको हो ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले वस्तुगत सहायता तर्फ प्राप्त एक अर्व नौं करोड ३५ लाखको लेखा परीक्षण नै नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ । याे खबर आजकाे राजधानी दैनिकमा छ ।
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ लाख ९१ हजार नाग्यो
एजेन्सी, नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ५ लाख ९१ हजार ९३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
Posted By: 24 News Presson: July 14, 2020
काठमाडौँ, देशभरका केन्द्रीय अस्पताल र केही प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्ने तयारी भएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै पनि व्यक्ति पैसा नभएर आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नहोओस् भन्ने ध्ययले सरकारले प्रारम्भिक आकस्मिक सेवा सुरु गर्ने भएकाे हो ।
केन्द्रीय अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएकाे छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा लेखनकाे कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएकाे छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलको संयोजकत्वमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कसम्बन्धी मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरिएको साथै भोलि (मंगलबार)सम्म निर्देशक समितिलाई मस्यौदा पेस गर्ने तयारी भएकाे संयोजक पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार, ‘इमर्जेन्सी कक्षमा बिरामी आइसकेपछि खतरामुक्त नहुँदासम्म लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नेलगायतका विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । आकस्मिक सेवाका लागि आएको व्यक्ति कि ज्यान कि अंगको खतरा भएर आएको हुन्छ ।’
वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल, नेपाल पुलिस अस्पताल केन्द्र्रीय अस्पतालमा यस किसिमको सेवा पाइने भएकाे छ ।